DAAWO: M/weyne Farmaajo oo si cajiib ah ugu jawaabay Dawlad gobaleedyada.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbad ka jeediyey furitaanka kalfadhiga baarlamaanka Faderaalka, waxaana uu khudbadiisa aad uga hadlay xaaladdaha siyaasaded ee dalka.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay tan iyo doorashadiisii in uu dalku ku jiro marxalad adag oo ay wali la hardamayaan kooxaha Argagixisada, wuxuu sheegay in ay ku howlan yihiin sidii ay u soo celin lahaayeen dawladnimada Federaalka.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in aysan ka daali doonin in ay dib u soo celiyaan dawladnimada Soomaaliya oo ay waqti badan galin doonaan, wuxu sheegay in Soomaaliya ay cagaheda ku istaagay oo aysan dib u laaban doonin.
“Hayaanka dib u soo nooleynta Qaranimada Soomaaliya maaha mid ummadda Soomaaliyeed iyo Madaxdooduba ay dib uga noqon karaan, waxaan Ummadda Soomaaliyed ugu baaqayaa in ay u midobaan sidi ay ula dagaalami lahayeen Argagixisada ku howlan daadinta iyo cid kasta oo kasoo horjeeda Qaranimada Soomaaliya” Ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya.
Marar badan ayuu kusoo celceliyey Madaxweynuhu in uu dalku ku jiro marxalad adag, si wadajir ah oo kaliyana looga gudbi karro, Nabadgalyo daradda, Argagixisada, daganaansho la’aanta Siyaasadeed iyo arrimaha taagan.
Doorashooyinka ayaa sheegay in ay dawlad gobaleedyada ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka oo ay dhameystireen dhammaan qodobada Dastuuriga ah oo ay dhinacyada oo dhan u siman yihiin, kuwaas oo hadda diyaarsan.
Madaxweyne Farmaajo, ayaa kuceliyey in uu qaban doono doorashooyin hal qof iyo cod ah, taas oo uu sheegay in ay hadda doonayaan in meelmar laga dhigo.
“Wey ka gudbaan xiligii lagu awr kacsan jiray dadka Soomaaliyeed”ayuu yiri isagoo ka hadlayay arrimaha ku wajahan dawlad gobaleedyada, wuxuuna sheegay in ay xooga saarayaan in ay la hadlaan cid kasta oo mudan in la garabistaago.
HALKAAN KA DAAWO KHUDBADDA M/WEYNAHA
“Nidaamka Federaalka waa nidaam umadda Soomaaliyeed ay dooratay waa hab maamulka dowladeed, umadda soomaaliyeed illaa iyada ka go’aansato inay wax ka bedesho dowlad ama koox gaar wax ka bedeli karta aysan jirin, waxaa nasiib daro in dad gaar ah si qaldan u fahmeen nidaamka federaalka wuxuu si cad u qeexayaa awoodaha dowladda Federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, dowlad goboleedyada ma siineyso madax banaani gaar ah, waxaa idin xusuusinayaa ilaalinta Qaranimada Madax banaanidiisa wy saaran tahay dowladda Federaalka”
“Waxaan nasiib darro ah in Nidaamka Federaalka dad si gaar ah u macneeyeen, oo ay ka leyihiin dano siyaasadeed, mana aan ka yeeli doono” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya, wuxuu sheegay in ay ka shaqeynayaan ammaanka iyo Midnimada Geeska Afrika, isagoo aan soo qaadin xaaladaha dalka, oo ay ka mid yihiin arrimaha ka taagan Jubbaland oo dawladda Faderaalku ay amaro kala duwan ku soo rogtay.